नुवाकोटमा आलु र तरकारीका लागि रु पाँच करोड - halokhabar.com नुवाकोटमा आलु र तरकारीका लागि रु पाँच करोड - halokhabar.com
(No Comments) September 6, 2018
तरकारी क्षेत्रले नुवाकोटका चार गाउँपालिकालाई समेटेको छ । ककनी गाउँपालिका १ देखि ७, शिवपुरी गाउँपालिकाको वडा नं ६, ७ र ८, पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५ तथा दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ५ लाई समेटेको छ । तरकारी क्षेत्रले जिल्लामा २५० हेक्टर क्षेत्रफल समेटेको छ । नुवाकोटमा तीन हजार २३८ हेक्टर जमीनमा तरकारीखेती गरेकाछन् । अहिले २५० हेक्टरबाट कार्यक्रम शुरु गरिए पनि यसको क्षेत्र विस्तार हुँदै जाने डा. गैरेले बताउनुभयो ।
तरकारी क्षेत्रमा ७६ कृषक समूह, सहकारी र उद्यमी संलग्न छन् जसमा एक हजार ३७ किसान प्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएर तरकारी खेती गरिरहेका छन् । कार्यक्रम क्षेत्रले समेटेको गाउँमा १४ लाख तरकारीका विरुवा उत्पादन गर्ने क्रममा रहेको तरकारी जोन सञ्चालन समितिका संयोजक रामप्रसाद पुडासैनीले बताउनुभयो । १५ वटा वडामा १५ नर्सरी स्थापना भएको छ ।
नुवाकोटमा आलुको विकास र विस्तारको लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । डेढ वर्षअघिबाट शुरु भएको आलु क्षेत्र परियोजनाको लागि चालू आवमा रु दुई करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आलु खेतीले लिखु, पञ्चकन्या, ककनी र सूर्यगढी गाउँपालिकाको ५८० हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यस कार्यक्रममा ४० कृषक समूह, २४ सहकारी, १३ उद्यमी र पाँच हजार ५२९ किसान आबद्ध भएको प्रमुख डा. गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सो क्षेत्रमा गत वर्ष ४४७ माटो परीक्षण, बीउ आलु वितरण, १० साना सिँचाइ योजना निर्माण, प्रविधि सहयोगजस्ता कार्यक्रम सञ्चानल भएको थियो । चालू वर्षमा आलु चिप्स मेशिन स्थापना, ५० प्रतिशत अनुदानमा प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि चुन वितरण कार्यक्रम तय भएको छ ।
नुवाकोटमा आलुको उत्पादन राम्रो हुँदै आएको छ । थानसिङ, ढिकुरेलगायतका फाँटबाट किसानले हरेक वर्ष करोडौँको आलु उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । रासस